Sandals sy tora-pasika Resorts Nahazo Loka 13 New Diving Magazine
Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Sandals sy tora-pasika Resorts Nahazo Loka 13 New Diving Magazine
Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Vaovao Mafana Saint Lucia • Sports • Tourism • Travel Wire News
Ny kapa sy ny tora-pasika dia nahazo mari-pankasitrahana lehibe tamin'ny Dive
Sandals Resorts sy Beaches Resorts dia manohy mametraka ny fenitra avo lenta ho an'ny toeram-pisakafoanana antsitrika rehetra ao Karaiba.
Nambaran'izy ireo ny mari-pankasitrahana farany avy amin'ny Scuba diving Magazine ny 2022 Loka safidin'ny mpamaky ho an'ny Karaiba.
Isan-taona, Scuba diving Ny mpamaky ny magazine dia manombana ny toeram-pisakafoanana antsitrika manerana izao tontolo izao ary mandinika sokajy isan-karazany.
Ireo sokajy ireo dia manomboka amin'ny kalitaon'ny efitrano sy trano fisakafoanana ka hatramin'ny kalitaon'ny mpiasa, ny traikefa tsara indrindra ho an'ny fianakaviana, ary ny maro hafa.
Loka miisa 13 no azon'ny marika Luxury Included®:
#1– Traikefa tsara indrindra ho an'ny fianakaviana - Toeram-pisakafoanana amoron-dranomasina
#1 - kalitaon'ny efitrano- Sandals Grande St. Lucian
#2 - kalitaon'ny efitrano- Sandals Grenada Resort and Spa
#2 - kalitaon'ny trano fisakafoanana- Sandals Grande St. Lucian
#3 - kalitaon'ny Resort- Sandals Grande St. Lucian
#3 - kalitaon'ny trano fisakafoanana- Sandals Grenada Resort and Spa
#5 - kalitaon'ny Resort - Sandals Grenada Resort and Spa
# 10 - kalitaon'ny efitrano- Sandals Negril
#10 - kalitaon'ny mpiasa- Sandals Grande St. Lucian
# 10 - Ny kalitaon'ny efitrano- Sandals Montego Bay
#15– Tsara indrindra amin'ny ankapobeny- Sandals Grande St. Lucian
#15 - kalitaon'ny trano fandraisam-bahiny- Sandals Ochi Beach Resort
Hatramin'ny nanombohan'ny fiaraha-miasan'izy ireo tamin'ny taona 1997, ny PADI® dia nametraka ny Sandals Resorts sy Beaches Resorts ho iray amin'ny Top 5 Dive Operations any amin'ny Ila Bolantany Andrefana. Ny orinasa Luxury Included® dia manolotra fanamarinana sy fanofanana PADI® manam-pahaizana ho an'ireo vahiny mijanona ao amin'ny toeram-ponenana ary namoaka mari-pankasitrahana PADI efa ho 140,000 hatramin'izao. Fanamarinana azo alaina amin'ny vanim-potoanan'ny toeram-pialan-tsasatra avy amin'ny fanamarinana PADI Open-Water ka hatrany amin'ny mari-pankasitrahana ho an'ny Mpampianatra Staff PADI IDC ary fampianarana manokana tsy tambo isaina eo anelanelany. Ao anatin'izany ny fianarana manokana PADI Lionfish Hunter, izay hianaran'ireo vahiny avy amin'ny toeram-pialan-tsasatra voafantina ny fomba fihazana araka ny tokony ho izy ireo karazana Karaiba manafika sy mahandro ny hazandranony manokana.
Rehefa mijanona any amin'ny toerana misy ny orinasan'ny toeram-pialan-tsasatra manerana an'i Karaiba, dia afaka mitsoraka isan'andro ireo mpisitrika manana mari-pahaizana ary entina avy amin'ny dingan'ny efitranony mankany amin'ny toerana hafahafa izay mirehareha amin'ny haran-dranomasina maro loko, ny sambo vaky sambo, ny fianjerana ary ny karazam-biby anaty rano. Miaraka amin'ny Sandals Resorts sy Beaches Resorts' Aquacenters manome fitaovana avo lenta miaraka amin'ny zava-drehetra avy amin'ny mpandrindra Scuba Pro® sy BCD, saron-tava, snorkels, Deep Blue Fins® ary fiara mifono vy ho an'ny sambo Newton diesel kambana manara-penitra, afaka mankafy traikefa ambanin'ny rano tsy manam-paharoa ny mpisitrika, tafiditra ao anatin'izany avokoa. Ho fanampin'ny fandaharana antsitrika midadasika, tsy ho ela dia ho afaka hijery ny ranon'i Curaçao malaza eran'izao tontolo izao ny vahiny ao amin'ny toerana fitsidihan'ny Sandals Resorts, Sandals Royal Curaçao, nanomboka tamin'ny Aprily 2022.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny toeram-pialan-tsasatra nahazo loka na hamandrika ny fijanonanao manaraka, tsidiho azafady: kapa.com ary torapasika.com.